Led Downlight, Led Down Light က, Dimmable Downlight - ပလြော့
တောက်ပသောပြည်တွင်း downlight ပတ်လည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိလူရဲ့အသက်တာကိုဂရုစိုကျ။ မီး rated downlight ဘေးကင်းနေထိုင်နေစေသည်။ tilt နဲ့ variable ကိုရောင်ခြည်ထောင့်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှအာရုံစိုက်အလင်းရောင်ပေး downlight setting ။ IP65 downlight ရေနှင့်မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆထိုးဖောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ အမြင့် RA နှင့် CRI သင့်ရဲ့လူနေမှုပိုပြီးမှန်ကန်ပါစေ။ အနိမျ့တောက်ပအလင်းအလင်းကျန်းမာသန်စွမ်းစေသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်လွယ်ကူဝါယာကြိုးလျော့နည်းသင့်ရဲ့ဥပဒေကြမ်းပါစေ။
မီး Rated.30min, 60min & 90min
CCT နှင့် bezel Interchange
IP65 & စောင်း
Screwless & LOP IN / OUT ဆက်သွယ်မှု
တဦးတည်းဆီမီးခွက်ထဲမှာချိန်ညှိခြင်း variable Beam ကို Angle
တဦးတည်းဆီမီးခွက်ထဲမှာ setting နွေးဖို့ CCT ပြောင်းလဲမှု + Dim
ဘတ်ဂျက်နှင့်ဝန်ကြီးချုပ် - တောက်ပသောစီးပွားဖြစ် downlight ကွဲပြားခြားနားသောဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့နှစ်ခုပ္ပံသို့ကျရောက်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား fittings CFL နှင့် PL အလင်း၏ဒီဇိုင်းကိုအစားထိုးဖြစ်ကြသည်။ ကြောင့်ရှည်လျားအလင်းရောင်အချိန်နှင့်အသုံးပြုသောအထူးဧရိယာရန်, ပလြော့စီးပွားဖြစ် downlight5နှစ်အာမခံပေးသည်နှင့်တဦးတည်းဆီမီးခွက်၌ သာ. variable ကို function ကိုရှေးခယျြစရာကိုဆက်ကပ်။ ဒါ့အပြင်မတူညီတဲ့ optic option ကိုအသုံးပြုသူအလင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုဒီဇိုင်းအတော်များများရွေးချယ်မှုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
တဦးတည်းဆီမီးခွက်ထဲမှာ CCT ပြောင်းလဲ
multi optic ရွေးစရာများ (relector + မှန်ဘီလူး + ပျံ့)
Triac, Dali & 1-10v အလင်းမှိန်ခြင်း options များ
တောက်ပစမတ် downlight APP ကိုဘလူးတုသ်နည်းပညာ အသုံးပြု. ကနေတဆင့်ထိန်းချုပ်သည်။ အဆင်မပြေထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်ဖုန်းပျောက်ဆုံးကျော်ကလူစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေလျှော့ရန်, ငါတို့ကိုက်ညီဖို့မြို့ရိုးကို switch ကိုရှိသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအခြားသူများက system ကိုကြှနျတျောတို့၏စမတ် downlight ပိုပြီးလိုက်ဖက်နိုင်ပါတယ်။ အပြင်ထိန်းချုပ်မှုကနေမီးခွက်၏အစွမ်းထက် function ကိုတစ်ဦးသောသတ္တဝါဖြစ်၏။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသော application များအတွက်သင့်လျော်သောအရာအဖြူနှင့် RGB အတွက်အဓိကအလင်းနှင့်အိမ်ဖွဲ့အလင်းရှိပါတယ်။ ပလြော့စမတ် downlight နှင့်အတူ, သငျသညျမီးခွက်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနှင့်ကိုက်ညီအောင်နိုင်ပြီးမည်သည့်ဖုန်းများ၏ထိတွေ့မှုမှာအဘယ်မှာရှိ။
အထိခိုက်မခံ facia အားတို့ထိပါ
ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုအလင်းအုပ်စုအချက်ပြ
ရောနှောတပ်ဆင်အတွက် D1 & C1 ဟာထုတ်ကုန်တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့
ကျွန်ုပ်တို့၏ပလြော့ Lighting ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များပြိုင်ဖက်ကနေခွဲခြားနှင့်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်များတွင်အများဆုံးတန်ဖိုးကိုအောင်မြင်ရန်ဖောက်သည်ကို enable ပြုလုပ်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Multi-lingual ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာတိကျစွာအားလုံးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်နှင့်ပြည့်စုံကန်ထရိုက်စဉ်နှင့်အပြီးရှေ့တော်၌, စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဝန်ဆောင်မှုစံချိန်စံညွှန်းများကိုအလုပ်လုပ်ကြသည်။
LED ကို Downlight ထုတ်ကုန်များ၏အထူးကုလိမ္မော်ရောင်ပေးသွင်း
E-mail ကို: sales@cnradiant.com
Adress: Jiatai လမ်းမကြီးအနောက်, Fenghuang မြို့, Zhangjiagang, Jiang su, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-0512-58428167